ဆီလီကွန်ထည့် ထားတယ် ဆိုပြီး ဝေဖန်နေကြတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေ ကိုအမှ န် အတိုင်း ပြောပြလာတဲ့ မမဆောင်း - 9Style
ဆီလီကွန်ထည့် ထားတယ် ဆိုပြီး ဝေဖန်နေကြတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေ ကိုအမှ န် အတိုင်း ပြောပြလာတဲ့ မမဆောင်း
မင္းသမီးေခ်ာ ေဆာင္းအိေျႏၵထြန္းကေတာ့ ပရိတ္သတ္ခ်စ္ မင္းသမီး တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ရပ္ တ ည္ ေနသူျဖစ္ၿပီး မိဘအေမြေတြကို တစ္ေယာက္တည္း ရရွိခဲ့တာေၾကာင့္ အလႉအတန္းမ်ားကို မ ျပ တ္ ျပဳလုပ္ေနသူပါ။သူမဟာ ”ေဆာင္းအိေျႏၵထြန္း ရဲ႕ခ်စ္သူဟာ ဆရာဝန္လား? စစ္ဗိုလ္ လား ? ေဘာလုံးဥကၠဌ လား? “ဆိုၿပီးေတာ့ ေဝဖန္မႈေတြက ျမင့္တက္လာရာမွ ပရိသတိစိတ္ဝင္ စား ခံ လာျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ယခုရက္ပိုင္းမီဒီယာေတြ႕ဆုံမႈတစ္ခုမွာေတာ့ မမေဆာင္းက ဆီလီကြန္ထည့္ထားတယ္ ဆိုၿပီး ေဝ ဖန္ေနၾကတဲ့ ပရိတ္သတ္ေတြရဲ႕ ေျပာဆိုမႈေတြကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ျပန္လည္ေျဖရွင္းလာခဲ့ တာ ပါ။
“မမေဆာင္းကအရမ္းရွက္တတ္တယ္၊ ဆီလီကြန္ေတြဘာ ေတြေတာ့မထည့္ျဖစ္ဘူး၊က်န္းမာေရးနဲ႔ မညီၫြတ္တာေတြဆိုရင္ ေရွာင္ပါတယ္ ေဆး႐ုံလည္းမတက္ရဲဘူးေလ ေဘာင္းဘီႏွစ္ထပ္ေတြ ဘာေတြေလာက္ပဲ ဝတ္ျဖစ္တာပါ။ သူမ်ားေတြအရမ္းလွေနရင္အားက်တယ္။ ကိုယ္ကေတာ့ သ တၱိ ကေတာ့လုံးဝမရွိဘူး၊ လိုင္းေပၚမွာ တင္ပါး ပို႔စ္Selectionေတြလုပ္ၿပီးစၾကတယ္ ”ဆိုလာခဲ့ တာ ပါ။
ဆက္လက္ၿပီးမမေဆာင္းက “ေမာ္လၿမိဳင္သူမို႔ကိုယ္လုံးကြက္ ကြက္ကြင္းကြင္းနဲ႔ အဲဒီလိုျဖစ္ေန တာမို႔ကိုယ့္ကိုခ်စ္လို႔စတာပဲသေဘာထားပါတယ္ ဘယ္လိုမွလည္းစိတ္မရွိပါဘူး သူတို႔ Troll တဲ့ သူေတြေၾကာင့္ မမေဆာင္းဆိုၿပီးခ်စ္တဲ့သူေတြလည္းမ်ားလာတဲ့အတြက္ အဲ့လိုစေနတဲ့ ပရိသ တ္ ေတြတိုင္းကို မမေဆာင္းက ေက်းဇူးတင္ပါတယ္လို႔ေျပာခ်င္ပါတယ္” လို႔ဆိုလာခဲ့တာျဖစ္ ပါတယ္ ပရိသတ္ႀကီးေရ မမေဆာင္းကေတာ့ ဆီလီကြန္ထည့္ထားတယ္ ဆိုၿပီး ေဝဖန္ေနၾကတဲ့ အေပၚျပန္လည္ေျဖရွင္း လာ ခဲ့ တာပဲျဖစ္ပါတယ္ ပရိသတ္ႀကီးေရ…… ပရိသတ္ႀကီးရဲ႕ အျမင္ကိုလည္း မွ်ေဝခဲ့ၾကပါအုန္း ေနာ္
မင်းသမီးချော ဆောင်းအိန္ဒြေထွန်းကတော့ ပရိတ်သတ်ချစ် မင်းသမီး တစ်ယောက်အနေနဲ့ရပ် တ ည် နေသူဖြစ်ပြီး မိဘအမွေတွေကို တစ်ယောက်တည်း ရရှိခဲ့တာကြောင့် အလှူအတန်းများကို မ ပြ တ် ပြုလုပ်နေသူပါ။သူမဟာ ”ဆောင်းအိန္ဒြေထွန်း ရဲ့ချစ်သူဟာ ဆရာဝန်လား? စစ်ဗိုလ် လား ? ဘောလုံးဥက္ကဌ လား? “ဆိုပြီးတော့ ဝေဖန်မှုတွေက မြင့်တက်လာရာမှ ပရိသတိစိတ်ဝင် စား ခံ လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ယခုရက်ပိုင်းမီဒီယာတွေ့ဆုံမှုတစ်ခုမှာတော့ မမဆောင်းက ဆီလီကွန်ထည့်ထားတယ် ဆိုပြီး ဝေ ဖန်နေကြတဲ့ ပရိတ်သတ်တွေရဲ့ ပြောဆိုမှုတွေကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြန်လည်ဖြေရှင်းလာခဲ့ တာ ပါ။
“မမဆောင်းကအရမ်းရှက်တတ်တယ်၊ ဆီလီကွန်တွေဘာ တွေတော့မထည့်ဖြစ်ဘူး၊ကျန်းမာရေးနဲ့ မညီညွတ်တာတွေဆိုရင် ရှောင်ပါတယ် ဆေးရုံလည်းမတက်ရဲဘူးလေ ဘောင်းဘီနှစ်ထပ်တွေ ဘာတွေလောက်ပဲ ဝတ်ဖြစ်တာပါ။ သူများတွေအရမ်းလှနေရင်အားကျတယ်။ ကိုယ်ကတော့ သ တ္တိ ကတော့လုံးဝမရှိဘူး၊ လိုင်းပေါ်မှာ တင်ပါး ပို့စ်Selectionတွေလုပ်ပြီးစကြတယ် ”ဆိုလာခဲ့ တာ ပါ။
ဆက်လက်ပြီးမမဆောင်းက “မော်လမြိုင်သူမို့ကိုယ်လုံးကွက် ကွက်ကွင်းကွင်းနဲ့ အဲဒီလိုဖြစ်နေ တာမို့ကိုယ့်ကိုချစ်လို့စတာပဲသဘောထားပါတယ် ဘယ်လိုမှလည်းစိတ်မရှိပါဘူး သူတို့ Troll တဲ့ သူတွေကြောင့် မမဆောင်းဆိုပြီးချစ်တဲ့သူတွေလည်းများလာတဲ့အတွက် အဲ့လိုစနေတဲ့ ပရိသ တ် တွေတိုင်းကို မမဆောင်းက ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်” လို့ဆိုလာခဲ့တာဖြစ် ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ မမဆောင်းကတော့ ဆီလီကွန်ထည့်ထားတယ် ဆိုပြီး ဝေဖန်နေကြတဲ့ အပေါ်ပြန်လည်ဖြေရှင်း လာ ခဲ့ တာပဲဖြစ်ပါတယ် ပရိသတ်ကြီးရေ…… ပရိသတ်ကြီးရဲ့ အမြင်ကိုလည်း မျှဝေခဲ့ကြပါအုန်း နော်
ကိုယ်ဝန် ကြီး နဲ့ မို့ မလုပ်ပါ နဲ့ပြော တာ ကို တား မရ၍ မခံနိုင် တဲ့ အဆုံး ရပ် ကွက် ရုံး တိုင်ကြား ခဲ့ရတဲ့ အဖြစ်
အကယ်ဒမီ စာရင်းကနေ ရှေးရိုးစွဲ အယူတချို့ကြောင့် ထုတ်ပယ်ခံရပြီး ကြိတ်ငို ခဲ့ရကြောင်း ပြောပြခဲ့တဲ့ ဖွေးဖွေး